Uma ujabulele ukudla nezithombe noma ngokudubula isihloko, wazi kahle ukuthi kwenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu uhlwayi ezinhle ilungelo futhi ezihleleke kahle. Ngaphezu kwalokho, uma sisisebenzisa kusukela shot shot, kuba ngasemuva kungahle kungasheshi lwentando photographer.
Siyini isizinda ukusebenzisa
Ukuze namanje izithombe, ungasebenzisa elikhanyayo iyunifomu ebusweni ukwakheka noma yokuqala: kule nkambo, ungakwazi abeke ithebula ezindala zamapulangwe, Indwangu ngomala nge iphethini yokuqala, isitini ngisho zemabula yokufakelwa.
Nokho, uma photographer studio kakade original ngomala kwamanzi, kepha uma kungenjalo, kanjani Photobackground izandla zami siqu. Isikhathi esining impela, bezithombe zisebenzisa izincezu bokuzenzela noma wangempela izinto ezihlukahlukene. Kodwa umbuzo isitoreji izinto ezinjalo. Nokho, kukhona enye indlela: the Photobackground yasekuqaleni kungenziwa ngokuzimela, ukheshi izindleko kuyoba esincane, futhi ukugcina futhi zibashukumisele ngempela kalula.
kanjani Photobackground izinkuni ngezandla
izizinda Ngokhuni namuhla phakathi ethandwa kakhulu. Ngokuvamile asetshenziswe ukudla izithombe, kanye ukudalwa isithombe isitayela wabantu flat. isizinda Ngokhuni ungakwenza ngokwakho, usebenzisa ibhodi ezivamile. Ukugqamisa ukuthungwa, ebusweni eqeda kungenziwa embozwe upende acrylic noma ibala.
Uma ungazi kanjani ukwenza Photobackground lokhuni ngezandla zabo, bese ungasebenzisa eyodwa yezindlela ezilula. Ukuze usebenze badinga amabhodi ambalwa sokhuni, izinzipho ketshezi, lokukhuhla, okungenxa yezimo ezikhethekile matte ukuvenisha zibe yizinkuni noma ukhuni ibala.
amabhodi lithi wanqunywa ngokuhambisana ubukhulu elamukelekile, uma kunesidingo, ngamunye kufanele sanded nge lokukhuhla. Uma oyifunayo, isihlahla kungaba ukukhulisa uzokhathala ngokuphatha ubuso bayo nge ibhulashi ngoba ukuxubha ugodo.
Lapho amabhodi zilungele, badinga ukubamba ndawonye. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukusebenzisa izinzipho ketshezi, ikakhulukazi uma ufuna ukwenza ngemuva amabili emaceleni. Amabhodi abekwa eduze kwamanye ubuso ngamunye phansi (ithuba has isikwele noma unxande). Liquid Nails isicelo perpendicularly ungqimba wokuqala kanye ungqimba yesibili amabhodi esinqunyiwe (futhi perpendicular uyibhekise phansi). Lapho ketshezi bome izinzipho, ingemuva ibala ebusweni alunge.
Uma wake wazibuza ukuthi uyenza kanjani Photobackground izinkuni ngezandla zabo, niyazi, ingemuva isicishe ilungele. kungenziwa ngokuzikhethela ibala isicelo izikhathi eziningana, okuvumela kusendlalelo ngasinye ukuze ome. Ukugqamisa ukuthungwa ebusweni ebhodini kumele kahle sanded nge lokukhuhla. isizinda Bilateral kungenziwa zipendwe ngemibala emibili. Ekupheleni ngalinye side ikhava matte ukuvenisha e izingqimba ezimbili, ngakho ebusweni ivikelwe fat, amanzi nokunye okunjalo. D.
kanjani Photobackground ngaphansi ukhonkolo ngezandla
isithakazelo Photobackground bezithombe eziningi, kungaba esihle esisendaweni ekahle kakhulu ngoba ezihlukahlukene isibhamu. isizinda esinjalo ubukeka ngempela aesthetically ukujabulisa, akusho ukuphazamisa nokunakwa main ihlumela tinkhulumo, kahle ukubeka off wakhe.
Indlu kusukela izinto ukuze benze isizinda esinjalo ulula. Futhi nakuba igama iqukethe igama elithi "ukhonkolo", kodwa kuphela izinkuni putty isidingo isizinda esinjalo. Ngaphezu kwalokho ewusizo "umbala" - kuba black umbala ezithile, okuyinto uzokunika umbala ekhethekile ngemuva. Ake sithi, ukukhiqiza isizinda grey, kumele uthenge yamathebhu, putty futhi black umbala wesikimu. Lapho ukuxuba yamathebhu elimhlophe kanye udayi omnyama uthola grey tint, okuyinto lisetshenziswa base lokhuni.
izinto ezidingekayo bumbela izinyathelo
Ukuze womshini isizinda isithombe ngaphansi ukhonkolo kufanele uzilungiselele:
Jar yamathebhu zibe yizinkuni;
umbala umbala oyifunayo;
Ukucabanga indlela yokwenza Photobackground ngezandla zabo, kumelwe siqale ukhethe isisekelo ngalezi zinhloso kungenziwa amaphepha kuyizinhlayiyana ibhodi, ipulangwe, njll Ubukhulu ngayinye ukhetha yayo esetshenziswa, kodwa elilungile kakhulu - .. Ingabe 50x50 cm kuyadingeka ukuze uqiniseke ukuthi umuthi hhayi ezimanzi. , kungenjalo yamathebhu ngeke ewa. Kwenzeka okufanayo uma ku a ngokhuni base amafutha. Ingemuva kungenziwa pre-primed - kuyoba ngcono ukuphikelela ka putty nge ngemuva.
Okulandelayo, udinga ukusebenzisa putty. Wafaka ungqimba elincanyana, esehlanganise zonke uqhekeke futhi ube. Ekugcineni, phambi kufanele surface bushelelezi.
Isendlalelo wesibili ka putty phezu emaphethini ngemuva. Kulokhu, ungasebenza le yamathebhu omhlophe, noma alulaze ke inki omnyama ukukhiqiza shades of gray. Ingemuva asithe ukunyakaza okuncane ngesikhathi isihlahla kufanele zingabonakali.
Lapho umsebenzi usuphelile, ngemuva inikezwe 5-10 imizuzu ukuze ome. Khona-ke spatula wetted ngamanzi futhi siwela kanye ebusweni ukuze kwakhiwe streaks kwalo. Akubalulekile ukwakha kubo liphezulu kakhulu, kuyoba okwanele smear ukuphakama mayelana 0.3 cm. Ulungisela isizinda bavunyelwe ome mayelana 1-2 izinsuku Igumbi lokushisa.
Uma sikhuluma iphepha, lokhu kungenxa yezindlela ezingcono kakhulu isabelomali ongakhetha. Kuyinto ngokuphelele evumelana nokudutshulwa ezingavamile nokusetshenziswa ekhaya. Uma ungazi kanjani ukwenza izandla zabo Photobackground lephepha, ungesabi, ngoba akuyona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Ngo ezisetshenziswa kakhulu emiqingweni iphepha lokunamathisela odongeni, iphepha, amaphepha lukathayela nokunye ukudweba. D.
Iphepha engasindi, kulula ukufaka, isitoreji kanye zokuhamba, kodwa ethile yayo eyinhloko yokuntuleka amandla futhi singcoliswe. Uma isizinda efana yalala emhlabathini, kuyoba kungenzeka kube-off omunye, njengoba amabala izimpawu phezu izithombe zibonakala kakhulu.
Uma ungazi kanjani ukwenza Photobackground amakhadibhodi ngezandla zabo, bese ungasebenzisa abavamile kakhulu odongeni-iphepha ukwenziwa ngemuva ekhaya. Ngaphezu kwalokho, abakwazi ukumboza lutho, ngoba kuze kube manje, okudayiswayo lodonga esitholakalayo ezihlukahlukene ukwakheka namaphetheni uyobheka limnandi kuletitfombe. Yiqiniso, ukuze uthole umqulu izithombe eziningana kuyinto kuyinto engenakwenzeka, Nokho, kwakudinga Scrap wallpaper, ungathola ekhaya, ngoba ngemva ukulungisa, abaningi bahlale izihlahla ezinjalo.
isisekelo Indwangu isizinda noma Indwangu iphethini libhalwe isetshenziswa kaningi. Lokhu akusona isimanga, ngoba unamandla ngokwanele, yensimbi kusetshenzwe futhi kulula kakhulu ukuba ngisithwale. Ngaphezu kwalokho, base Indwangu Kulula sasivumela ukulungisa, kuyilapho kubonakala nice izithombe, musa ahlakaze ukukhanya, futhi akuvezi ke. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze uqonde ukuthi ukwenza Photobackground Indwangu ezandleni zakho.
Ingemuva ngendwangu indwangu noma umane ohlakeni lokhuni noma lwensimbi, futhi umnikazi isizinda ephathekayo ngomumo. Kungcono ukukhetha indwangu ngomala Yiqiniso, ungathola nendwangu ngamaphetheni, kodwa kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ngemuva kufanele kwesokunxele ngemuva, futhi amaphethini akufanele obonakalayo kakhulu (isihloko ukuqopha "kokuphazamisa" akunakwenzeka).
Minus izicubu bangaba Kinks yayo kanye uhlevane ezingenziwanga wakhulelwa ngesakhiwo. Inzuzo ukuthi Photobackground enjalo kungaba ngokuphelele bonke osayizi, ngenkathi kungenziwa ogibele odongeni, amasango, nokunye. D.
Indlela fast do Photobackground: indlela elula
Ukuze uthole isithombe enhle, hhayi ngemuva ngempela Siwohloza izinkuni, iphepha noma indwangu. Uma unesithakazelo indlela yokwenza Photobackground izandla siqu ngokushesha futhi ngaphandle kwenkokhiso, ke le ndlela kuyoba isibusiso esikhulu ngawe.
etholakalayo Kalula kusukela ezihlukahlukene imibala isizinda kanye indlela yokwenza, kuyilapho bona angenza lukhulu, ngoba lezi nezizinda ungathathi isikhala kakhulu.
Kuyinto kudingekile kuphela ukulungiselela ikhamera nge isinqumo esihle bese ulinda sezulu esihle. Umsebenzi main - eyolanda ukuthungwa kunesidingo. Ungakwazi ukuthatha isithombe kwakhiwa uthango ubudala, ufafaze komduli, Snag esikhulu, njalo njalo. D. Kulokhu, izithombe kumele kucace, abukhali hhayi esikhanyayo.
Bese kusiza ...
Izindlu ungakwazi kuphela ukubuka izithombe. Udinga ukukhetha kuphela lezo zindawo isithombe, afaneleka ngemuva. Nge Photoshop ungasusa wonke engadingekile (amaqabunga, amatshe nokunye okunjalo. D.), Futhi ukwenza iphetheni ezifanele ngokusebenzisa izihlungi ahlukahlukene, ithoni, nika umehluko kanye nokunye okufana nalokho. D.
amafayela Ready kuthiwa kubangelwa iphrinta futhi uprinte ngokukhetha usayizi ofanele. Nokho, ukusebenzisa Photobackground umsebenzi okunye kufanele sisetshenziselwe iphepha lokunyathelisa amashidi kunalokho obukhulu.
Uma uqonda indlela yokwenza Photobackground ngezandla zabo, bese ungathola inketho umxhwele. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi ingemuva ezinhle futhi khona ikhamera akusho laba isisekelo segama isithombe esihle. Ngaphezu kwalokho, isidingo ukulandela imithetho ethize izithombe, cabangela ukwakheka kanye ukutshala umqondo oqukethwe isithombe, bese izithombe kuyoba ezithakazelisayo hhayi kuwe kuphela kodwa nakwabanye.
Fall photo shoot epaki: imibono, zibhekise
Lens Soviet: zonke ezinhle - ubudala
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ukuzilibazisa "Sura lufika": ngezibuyekezo nezithombe
Umuntu Bioreinforcement: izinkomba ukusetshenziswa, futhi ubuchwepheshe eziyisisekelo